ပုဇွန် ၁ ကီလို (ပုဇွန်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အခွံနဲ့ထားပါ)
Prawn 1 kg (wash well and keep the skin)
ငရုတ်သီးစိမ်း ၅ တောင့် (အစေ့ထုပ်ထက်ခြမ်းခြမ်းထားပါ)
Fresh chili5no (Deseeded and cut in half)
နံနံပင် ၃ ပင် (အနေတော်လှီးထားပါ)
Fresh coriander leaves3stalks (roughly chopped)
ဟင်းအနှစ်လုပ်ရန် (making curry paste)
သရက်သီးမှည့် ၂လုံး (အစေ့ဖယ်ပြီး အသားများလှီးပြီး ကြိတ်ထားပါ)
Ripe marian 15 no (remove stone, cut marian and blend to paste)
ကြက်သွန်နီ ၃ လုံး (နုတ်နုတ်လေးတွေ လှီးထားပါ)
Onion3no (finely chopped)
ကြက်သွန်ဖြူ ၄ တက် (နုတ်နုတ်လေးတွေ လှီးထားပါ)
ချင်း ၂ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း (ထောင်းထားသော)
Ginger2teaspoon (finely grated fresh ginger)
စပါးလင် ၁ ချောင်း (အဖြူပိုင်းပဲယူပါမယ်။နုတ်နုတ်စင်းထားပါ)
Lemon grass 1 stalk (take whit part and minced)
ငရုတ်သီးမှုန့် ၂ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
နနွင်းမှုန့် တစ်ဝက်ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
Ground Turmeric ½ teaspoon
နံနံမှုန့် ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
ဇီရာမှုန့် ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
ဆား ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
ငံပြာရည် ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
Fish sauce 1 teaspoon
နေကြာဆီ ၅ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
Cook sunflower oil5tablespoon
၁။ ဟင်းအနှစ်လုပ်ရန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ပြီး ညက်အောင်ကြိတ်ပါ။
1.Add all curry paste ingredients inafood processor and blend toasmooth curry paste.
၂။ အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။ ဆီပူလာလျင် သေချာ ကြိတ်ထားသော အနှစ်များထည့်ပြီး ၁၀-၁၅ မိနစ် လောက်ဆီသတ်ပါ။ မီးအနေတော်ထားပြီး နှံ့အောင်သေချာမွှေပေးပါ။ အနံ့မွှေးပြီး အနှစ်များ အနီရောင်းသန်းလာလျင်ရပါပြီး။ ဆီပြန်လာတာကို တွေ့ရပါမယ်။
2.Heat oil inapan until hot. Carefully add curry paste to the pan and fried for 10-15 minutes. Lower heat and stir carefully. When the curry paste is ready, curry paste will havearich red-brown color and aromatic and oil will show around edge of mass.
၃. ဟင်းအနှစ်ထဲ ပုဇွန်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း နှင့် ရေ ၃ ဇွန်းစားပွဲဇွန်းလောက် ထည့်ပြီး သေချာနှံ့အောင်မွှေပေးပါ။ အဖုံးအုပ်ပြီး ၈-၁၀ မိနစ်လောက်တည်ပါ။ ဆားမြည်းပါ လိုတာထပ်ထည့်ပါ။ မီးပိတ်ပြီး နံနံပင်ဖြူးပါ။ ထမင်းအဖြူ ဖြင့် တွဲစားလျင် အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။
3.Add prawns , chili and3tablespoon of water and stir well. Then cover pan and cook for 8-10 minutes. Taste and add according to your own taste. Off the heat and sprinkle with fresh coriander leaves. Serve with white rice.
Some of my fondest early me
Chef Syi Lwin's recipes
ကြက်သွန်ဖြူ မြိတ်နဲ့ ပြောင်းဖူးကိတ် (Corn Cakes with Chives)
အာလူးပြုတ် နဲ့ အမဲနံရိုး (Boiled Potatoes and Beef Rib)